डेङ्गीको प्रकोप नियन्त्रणका लागि विराटनगरमा फगिङ शुरु | रेडियो झापा 100.7 MHz.
डेङ्गीको प्रकोप नियन्त्रणका लागि विराटनगरमा फगिङ शुरु
डेंगुबाट एक विद्यार्थीको ज्यान गयो
रेडियो झापा 100.7 MHz. आइतबार, भाद्र २९, २०७६ १५:४४:०८
विराटनगर । डेङ्गीको प्रकोप नियन्त्रणका लागि विराटनगर महानगरले विद्यालय केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको छ । पछिल्लो समय एकजना बिद्यार्थीको डेंगीको संक्रमणबाट ज्यान गएपछि बिद्यालय लक्षित कार्यक्रम ल्याएको जनाएको हो । शनिवारवाट विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरुमा लामखुट्टेलाई नियन्त्रण गर्न ’फगिङ’ अर्थात् कीटनाशक रसायन धुँवा उडाएर मार्ने कार्यको थालनी भएको छ ।
विराटनगर महानगरका मेयर भीम पराजुलीले आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा फगिङ गर्दे यस कार्यको थालनी गरेका थिए । यस भन्दा अगाडि पनि पटक बस्तिहरुमा मात्र फगिङ गरिएको थियो । महानगरले यसपटक भने विद्यालय र सरकारी कार्यालयहाता भित्र फगर मेसिनवाट यो अभियान शुरु गरेको छ । यस संगै बस्ति क्षेत्रमा समेत पुनः फगिङ् गरिने महानगर स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत एपोलो भगतले जानकारी दिए । शनिवार मात्रै वडा नं ७ र वडा नं १० का सरकारी ,गैर सरकारी कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, नीजि विद्यालयहरुमा लामखुट्टे मार्ने काम भएको छ । यो अभियान महानगरका १९ वटै वडामा क्रमस काम गर्दै जाने बताइएको छ ।
केही महिनाअघि देखिएको डेङ्गीबाट संक्रमित बिरामीको सख्या विराटनगरमा समेत बढेको छ । लामखुट्टेलाई नियन्त्रण गर्न ’फगिङ’ अर्थात् कीटनाशक रसायन धुँवा उडाएर मार्ने कार्यको अभियान चलाइएको छ । यस अभियान संगै विराटगरमा सक्रमणको अवस्था घट्ने बिश्वास महानगरले लिएको छ ।